QARANIMOOY QAALIYEEY!!!! (FAALLO)
Qaranimadu waa wax aan sinaba looga maarmayn waayaha hadda la joogo ee dowladaha baasaboorka lihi ay is aqoonsan yihiin, waayo dadka kor degan dhulka, maanta ma jiro qof ka maarma qarankiisa ama dowladdiisa.
Qofka iyo qaranka iyo qaranka iyo qofka xiriir ayaa ka dhexeeya, labadaas isma seegi karaan, haddii ay is waayaana haybadii qofkaas ayaa lumaysa, wuxuu noqonayaa su’aal u joog, xabsi u joog iyo hantaaturo ma hure.
Qofka aan garanayn waxa ay kala maqantay qaranimada naga luntay, wuxuu mudan yahay inuu dhuuxo tusaalahan “walaal inuu macaan yahay ninkii madi ahaa baa og”, sidaas oo kale qaranimo inay macaan tahay qofkii qurba joog noqday, safray ama qaranimadiisii waayey isagoo u xiiso qaba ayaa og.
Labadan tusaale iyo kuwa badan oo ka horeeyey waxay dhaceen qaran jabkii Soomaaliya ka hor iyo kaddib.
Nin aan ka xumahay in aan magaciisa ilaabay ayaa ka qisooday sheekadiisa waagii dowladdii kacaanka 21 Oktoobar xoogga lahayd dhacday.
Xilli wuxuu ka sheekeeyey uu dalka Kenya gudaha u galay, uu dano ka yeeshay, hase yeeshee aan marin wadada saxda ah ee dalbashada Visa ama dal ku gal, markii uu Kenya galay oo qaasatan gaaray magaalada Nayroobi ayaa la xiray, weliba lagu oogay inuu sharci daro dalka ku yimid.
Waqti gaaban kaddib ayey arrinta ka war heshay safaaraddii Soomaaliya ee xilligaas oo la wareegtay ninkaas xaaladiisana si uu aad ugu qancay ugala xaajootay dowladda Kenya, isla markaana uu walwal la’aan dantiisii ku dhamaystay intii uu doonana ku joogay dalkaas dhib la’aan.
Dhaawac yar oo uu gaarsiiyey askari markii la qabanayey ayaa doodi ka dhalatay, waayo in uu qaran lagala xaajoodo leeyahay ayaa meesha ku jirtay.
Qisada yaabka lahayd ee ninkaasi ka dhawaajisay waxay ahayd in mas’uulkii safaaradu u soo dirtay arrintiisa oo waagaas u taagnaa danaha Soomaalida uu waqtigii burburka ku arkay magaalada Muqdisho isagoo duruuf haysa awgeed xamaali uu dhabarka ku qaado ku howlan, taasoo uu sheegay inuu aad uga murugooday ilmana ka soo baxsatay.
Isla ninkan waxaa qisadiisa ka mid ah safarkiisii labaad oo uu ku tagay Kenya, waqtiga qaran jabka oo uu kala kulmay qiso ka duwan tii waagaas.
Markii uu xaduuda soo gooyey, danani ka gayn waysay inuu xoogsi u doonto dalka Kenya ayaa muqalas kala soo booday halkaas balse waxaa qoorateeyey askar u tababar ugaarsiga dadka sharci darada ku soo gala dalkaas, dantoodu si kastaba ha ahaatee, waxayna ka duubteen lacag kaddibna dib ugu tureen xaduudii uu ka soo galay.
Mar kale, ayuu cagta saaray wadada, isagoo ku jeeda Mambasa, safarkaas dambe wuu mooday buundada Gaarisa laakiin dhowr jeer ayaa Nayroobi askari ku qabatay waana la furdaanshay, waana uun sidaas iyo dal aadan lahayn waa dareen ku joog.
Waxaa feertaal qisooyinkan iyo malaayiin kale oo ka sii daran ama la mid ah tan qofka Qaranka lihi la kulmo, waakan isna waa Soomaali, wuxuu ka dhaqaaqay dhinaca Yurub dhalashadiisu waa Ingiriis, markii uu soo gaaray Caasimadda Kenya ayuu la xiriiray Safaarada Ingiriiska wuxuuna u sheegay inuu yahay nin British ah oo dalka Keenya safar ku jooga, markaas ayuu kalsooni buuxda ku joogaa magaaladaas isagoo askarigii ka hor yimaada marka uu tuso baasaboorkiisa boqortooyada Ingiriiska ee gumaysan jirtay Kenya uu ka horkeeno Poole oo la mid ah waan ka xumay ama iga raali noqo.
Qaranjabka nagu dhacay ma ahan mid ku kooban bulshada oo aan haybad ku dhex lahayn dadyowga kale ee meelkasta ayey dhibaatadu Soomaalida ka saameysay, maalmo ka hor kulankii lagu soo gebagebeeyey KICC waxaa joogay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo sheeganaya inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriya Soomaaliya, haddana arrintaas waxaa ku beeniyey IGAD oo bayaankii madaxweyneyaasha waxaa lagu tilmaamay inuu yahay madaxweynaha TFG, waxaana meesha laga saaray jamhuuradda Soomaaliya, taasoo shantii kale ee madaxweyne mid kasta lagu asteeyey jamhuuriyadiisa.
Dhibku intaas kuma koobna ee meelkasta ayaan sidaas ugu bah dilanahay, waxaana qaranjabkeena ka mid ah in ninkii maamulka Soomaalida loo dhiibo dhinac kasta haka socdee qirada laga siibayo marka uu xilka qabto, xageen u dhignaa madaxweyne Soomaaliyeed oo caqligiisu siiyey inuu ciidan Itoobiyaan ah ku hanto xukunka Soomaaliya, xageen u dhignaa Shiikh mubaayaco diimeed dadkiisa la galay ee maalinba mowqif taagan.
Soomaalida waxaa la yiraahdaa waxaa ku jira dad fara ku tiris ah oo siyaasiyiinta Soomaalida ka mid ah oo leh mowqif, kuwaas xittaa dhibaatada haysata waxay tahay mowqifkooda ayaa xun waayo Cabdullaahi Yuusuf oo kale weligiis Itoobiya ayuu dabada ku watay, waxaana ka go’an inuu Soomaaliya madaxweyne u noqdo, tan xilka qof ayuu ahaan lahaa ama heli lahaa ama waayi lahaa laakiin Itoobiya inuu saaxiib la noqdo Soomaalina madaxweyne u noqdo islama heli doono haddii tuke aad u cad la arko xittaa.
Waxyaabaha Soomaalida qaranimadeedii sii durkinaya waxaa ka mid ah Sheekh Shariif, Shiikh Xasan Daahir, Sh. Cumar Iiman, Sh. C/qaadir Cali Cumar iyo culimadii kale oo is wada naqdinaya iyadoo ciidankii Itoobiya ee ka saaray intooda badan guryahoodii, kala daadshayna bulshadii la unkayey ay wadooyinka caasimadda Muqdisho weli joogaan, oo maalinkasta qof muslim ah oo Soomaali ah dilayaan.
Gebagebada waxaa loo baahan yahay in qofkasta oo Soomaali ah uu ku kalsoonaado in la heli karo jamhuuriyada Soomaaliya oo ah dal dadkiisu 100% muslim yihiin isla markaana ay xor u yihiin maamulka iyo qaranimadooda laakiin loo baahan yahay intaas laga wada shaqeeyo.
W/Qoray Tifaftiraha Wargayska QARAN
Cali Diini Geedi